တဈယောကျကို တဈယောကျမှ မလိုအပျတော့ရငျ တဈယောကျနားတဈယောကျရှိနလေဲ အပိုပါပဲ ။ – Shinyoon
သူ့ကို ကိုယျက လိုအပျတယျဆိုပမေယျ့လို့ သူက ကိုယျ့ကို မလိုအပျတော့ဘူးဆိုတဲ့အခါ ရပျနတေဲ့သူက အရူးသာသာပါပဲ ။ နာကငျြမှုတှေ ထပျပွီးတိုးလာတာကလှဲလို့မကျြရညျတှေ ခမျးသှားတာကလှဲလို့ တခွားဘာမြား မြှျောလငျ့ထားသေးတာလဲ တနျဖိုးထားလာမယျ့ တဈနကေို့လား ဒါမှမဟုတျကိုယျ အရေးပါလာမယျ့တဈနကေို့လား ။
ဖွဈလာနိုငျပါတယျ ဒါပမေယျ့ သူ့အနားရပျနတေဲ့ ကာလတဈလြှောကျလုံးမှာတော့ ကိုယျ့တနျဖိုးကို သိလာမယျမထငျဘူး … ကိုယျ သူ့အနားမရှိတော့တဲ့ တဈနမှေ့သာ ကိုယျ့တနျဖိုးတှေ သိလာမှာပါ … တဈယောကျက ကိုယျ့ကို မလိုတော့မှနျးသိရငျ အခြိနျတှေ အကွာကွီး မဖွုနျးမိစနေဲ့တော့ သူ့မကျြလုံးမှာ မငျးကို ဘယျလိုမွငျနသေလဲဆိုတာ သိပျကို အရေးကွီးတယျ
အဲ့ဒီအတိုငျး စိတျထဲမှာ စှဲသှားရငျ မငျးဘယျလောကျပဲ ကောငျးအောငျနနေပေါ သူ့အတှကျကောငျးနတေယျလို့ ဘယျတော့မှ မွငျမှာ မဟုတျတော့ဘူး … မငျးဘယျလောကျပဲ လုပျပေး လုပျပေး အကောငျးလို့ ထငျမှာမဟုတျတော့ဘူး … လူတဈယောကျရဲ့ စိတျထဲမှာ မငျးကို အပိုလို့ ထငျသှားရငျ ရပျနလေဲ ဘာတနျဖိုးမှ ရှိတော့မှာ မဟုတျဘူး ….
လိုအပျလာတဲ့အခြိနျ သတိရမယျ မလိုတော့အခြိနျ ခြောငျထိုးထားလိမျ့မယျ လိုသုံးတှလေိုတောငျ လိုတဲ့အခြိနျတိုငျး သုံးမှာ မဟုတျပဲ တခွားသူမရှိမှသာ ကိုယျ့ကို သတိရတာမြိုးပေါ့ …. တဈယောကျကို တဈယောကျမှ မလိုအပျတော့ရငျ တဈယောကျနားတဈယောကျ ရပျနလေဲ အပိုပါပဲ … ဒဏျရာတှေ ပိုလာတာရှိမယျ ဝဋျကွှေးတှေ ပိုလာတာရှိမယျ … တနျဖိုးတှတေော့ ကပြွီးရငျ ကတြာပါပဲ ။
တစ်ယောက်ကို တစ်ယောက်မှ မလိုအပ်တော့ရင် တစ်ယောက်နားတစ်ယောက်ရှိနေလဲ အပိုပါပဲ ။
သူ့ကို ကိုယ်က လိုအပ်တယ်ဆိုပေမယ့်လို့ သူက ကိုယ့်ကို မလိုအပ်တော့ဘူးဆိုတဲ့အခါ ရပ်နေတဲ့သူက အရူးသာသာပါပဲ ။ နာကျင်မှုတွေ ထပ်ပြီးတိုးလာတာကလွဲလို့ မျက်ရည်တွေ ခမ်းသွားတာကလွဲလို့ တခြားဘာများ မျှော်လင့်ထားသေးတာလဲ တန်ဖိုးထားလာမယ့် တစ်နေ့ကိုလား ဒါမှမဟုတ်ကိုယ် အရေးပါလာမယ့်တစ်နေ့ကိုလား ။
ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ် ဒါပေမယ့် သူ့အနားရပ်နေတဲ့ ကာလတစ်လျှောက်လုံးမှာတော့ ကိုယ့်တန်ဖိုးကို သိလာမယ်မထင်ဘူး … ကိုယ် သူ့အနားမရှိတော့တဲ့ တစ်နေ့မှသာ ကိုယ့်တန်ဖိုးတွေ သိလာမှာပါ … တစ်ယောက်က ကိုယ့်ကို မလိုတော့မှန်းသိရင် အချိန်တွေ အကြာကြီး မဖြုန်းမိစေနဲ့တော့ သူ့မျက်လုံးမှာ မင်းကို ဘယ်လိုမြင်နေသလဲဆိုတာ သိပ်ကို အရေးကြီးတယ်
အဲ့ဒီအတိုင်း စိတ်ထဲမှာ စွဲသွားရင် မင်းဘယ်လောက်ပဲ ကောင်းအောင်နေနေပါ သူ့အတွက်ကောင်းနေတယ်လို့ ဘယ်တော့မှ မြင်မှာ မဟုတ်တော့ဘူး … မင်းဘယ်လောက်ပဲ လုပ်ပေး လုပ်ပေး အကောင်းလို့ ထင်မှာမဟုတ်တော့ဘူး … လူတစ်ယောက်ရဲ့ စိတ်ထဲမှာ မင်းကို အပိုလို့ ထင်သွားရင် ရပ်နေလဲ ဘာတန်ဖိုးမှ ရှိတော့မှာ မဟုတ်ဘူး ….
လိုအပ်လာတဲ့အချိန် သတိရမယ် မလိုိတော့အချိန် ချောင်ထိုးထားလိမ့်မယ် လိုသုံးတွေလိုတောင် လိုတဲ့အချိန်တိုင်း သုံးမှာ မဟုတ်ပဲ တခြားသူမရှိမှသာ ကိုယ့်ကို သတိရတာမျိုးပေါ့ …. တစ်ယောက်ကို တစ်ယောက်မှ မလိုအပ်တော့ရင် တစ်ယောက်နားတစ်ယောက် ရပ်နေလဲ အပိုပါပဲ … ဒဏ်ရာတွေ ပိုလာတာရှိမယ် ၀ဋ်ကြွေးတွေ ပိုလာတာရှိမယ် … တန်ဖိုးတွေတော့ ကျပြီးရင် ကျတာပါပဲ ။